Indlela yokuThola kunye neNtlawulo yokuKhulelwa koMsebenzi woMfuno
Sciences soLuntu Ukubonelela & Ukufuna
Ingeniso kunye neNtlukwano Ukwanda kweMfuno
Ixabiso lokunyuka kweMfuno kunye neNgeniso
Omnye umbuzo obalulekileyo kwenkampani yinto ekufuneka ihlawule ngayo imveliso yayo. Ingaba kuya kuba nengqiqo ukunyusa amaxabiso? Ukunciphisa amaxabiso? Ukuze uphendule lo mbuzo, kubalulekile ukuqwalasela ukuba zingaphi iintengiso ziya kufumana okanye zilahleke ngenxa yeenguqu kwixabiso. Yiyo kanye apho intengo yokunyaniseka kwemfuno ifika emfanekisweni.
Ukuba inkampani ibhekane nemfuno ye-elastic, ke ipesenti yenguqu efunekayo ekufuneni kwayo iya kuba mkhulu kuneenguqu kwixabiso elenzayo. Ngokomzekelo, inkampani ebhekane nemfuno ye-elastic iyakubona ukunyuka kweepesenti ezingama-20 kwindleko enyanzelweyo ukuba iyanciphisa intengo ngama-10 ekhulwini.
Ngokucacileyo, kukho imiphumo emibili kwingeniso eyenzekayo apha: abantu abaninzi bathengisa imveliso yenkampani, kodwa bonke benza njalo ngentengo ephantsi. Kule ndlela, ukwanda kwenyuka ngaphezu kokugqithisa ukuhla kwexabiso, kwaye inkampani iya kukwazi ukwandisa ingeniso yayo ngokunciphisa ixabiso layo.
Ngakolunye uhlangothi, ukuba inkampani yayinokwandisa intengo yayo, ukuhla kwexabiso elifunekayo kwakungekho ngaphezu kokunyuka kwindleko, kwaye inkampani iya kubona ukuhla kweengeniso.
Imfuno ye-Inelastic kwiMpahla ePhakamileyo
Ngakolunye uhlangothi, ukuba inkampani ibhekene nesidingo se-inelastic, ke ipesenti yenguqu efunekayo ekufuneni kwayo iya kuba yincinci kuneenguqu kwixabiso elibeka kuyo. Ngokomzekelo, inkampani ejongene nemfuno ye-inelastic ingabona ukwanda kweepesenti ezingama-5 kwindleko efunekayo ukuba iyanciphisa intengo ngama-10 ekhulwini.
Ngokucacileyo, kusekho nemiphumo emibili kwingeniso eyenzekayo apha, kodwa ukwanda kwexabiso alinakugqithisa ukuhla kwexabiso, kwaye inkampani iya kunciphisa ingeniso yayo ngokunciphisa ixabiso layo.
Ngakolunye uhlangothi, ukuba inkampani yayinokwandisa intengo yayo, ukwehla kobuninzi obunyanzelekileyo bekungekho ngaphezu kwenyuka kwindleko, kwaye inkampani iya kubona ukwanda kwengeniso.
Ingeniso kunye neengqwalasela
Ukuthetha ngokwezoqoqosho, injongo yenkampani kukunyusa inzuzo, kwaye ukwandisa inzuzo akuqhelekanga into efanayo nokwandisa imali. Ngako oko, ngelixa kunokuba kukhangelekile ukucinga malunga nolwalamano phakathi kwexabiso kunye neengeniso, ingakumbi ukususela ekubeni umgaqo wokuncibilika kwento yenza kube lula ukwenza njalo, yinto yokuqala yokuhlola ukuba ukunyuka kwamanani okanye ukunciphisa ingcinga efanelekileyo.
Ukuba ukwehliswa kwintengo kulungelelaniso kwimbono yengeniso, kufuneka umntu acinge ngeendleko zokuvelisa umkhiqizo owongezelelweyo ukwenzela ukuba unqunyulwe ukuba inani lexabiso liyancipha.
Ngakolunye uhlangothi, ukuba ukwanda kwindleko kulungelelaniso kwimbono yengeniso, kufuneka ukuba yinto echanekileyo kwi-profit perspective kuphela ngenxa yokuba ixabiso lilonke liyancipha njengoko umkhiqizo omncinci uphuhliswa kwaye uthengiswa.
I-Slope ye-Curve-Run Run-Curved Supply Curve
Utshintsho kwi-Equilibrium ngeeMitha ezininzi zeeKharityhulam
Umlinganiselo woLuntu kunye noMbuzo wokuSebenza ngokuBambisana
Inkcazo efuna ukuchaza
Indlela yokuThuthuka kunye nokuKhathala kweZinto ezihambelanayo
I-Slope ye-Curgate Demand Curve
Indlela yokusebenzisa 'iAntes' kunye neenkcukacha ezihambelanayo
UkuTshintshiselwa kweMfazwe yaseMkhosini
UJames Dean Ukufa Kwengozi Yesikolo
Iipopayi eziyi-100 eziphezulu kuma-2000
Umprofeti uBrahim (uAbraham)
I-Vans Warped Tour Lineup ka-2011
Kutheni u-Angelea Preston engavumelekanga kwi-ANTM
Yiyiphi i-Gap yentela kwaye Kutheni Kubiza Imali?